धान कु’ट्ने मिलमा सल बे’रिएर महिलाको मृ’त्यु ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली !!
पुस – चौरपाटी गाउँपालिका–४ पायलका एक महिलाको कु’टानी पिसानी मिलमा सल बे’रिएर मृ’त्यु भएको छ ।
साँफेबगर नगरपालिका–१ बैजनाथमा रहेको आफ्नै कु’टानी पि’सानी मिलमा सल बेरिएर ५१ वर्षीया सुन्तला बोहराको घ’टनास्थलमै ज्या’न ‘ग’ए’को मृ’त’क’का श्रीमान शंकरमान बोहराले जानकारी दिए । धान कु’ट्ने क्र’ममा सल बे’रिएको हो । मृ’त’क बोहराको शरीर दुई भाग भएको छ । उनका दुई छोरा दुई छोरी छन ।
थप : दैलेख – शुक्रबारदेखि नेकपा एमाले दैलेखको जिल्ला अ’धिवेशन सुरु भएको छ। सहमति हुन नसकेपछि जिल्ला ने’तृत्वसहित पदाधिकारी र सदस्यका लागि मंगलबार भएको मतदानमा खसेको भन्दा बढी मतपत्र देखिएपछि मत ग’णना रोकिएको छ।
मंगलबार रातीबाट मत गणनाको तयारी गरेपछि मतपत्र गन्दा बढी देखिएपछि स्थगन भएको हो। बुधबार विहानैदेखि म’त ग’णना हुन नसकेपछि सहमतिका लागि छलफल भईरहेको छ। फेरि चुनाव हुने सम्भावना बढी रहेको एमाले दैलेखका एक नेताले नागरिकन्यूजलाई बताए।
मंगलबार भएको चुनावमा कुल मत ७ सय २१ रहेको थियो। जसमा ७ सय १७ मत खसेको थियो। मत गणनाको त’यारी गर्दा ७ सय ४८ मतपत्र देखिएपछि विवाद बढेको हो। खसेको मतपत्रभन्दा ३१ मत बढी देखीएपछि विवाद भएको हो । अध्यक्षमा रविन्द्रराज शर्मा र सुर्यबहादुर शाहीबीच प्र’तिष्पर्धा रहेको छ।
पदाधिकारी र सदस्यहरुको लागि चुनाव गरिएको थियो। बढी मत देखिएपछि म’तगणना रोकिएर छ’लफल चलिरहेको एमाले नेता नन्द्रकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए।
२०७८ पुष २९, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 109 Views